Jack Million Casino Yase Ningizimu Afrika 2020 - R15,000 Ibhonasi yesamukelo yamahhala
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekzo se-jack million casino
Isibuyekzo Se-Jack Million Casino
Usizo: 24/7, 24/7 Live Chat, Complaints Section
Ibhonasi Lokukwamukela:Ize ifike R15,000 Mahhala
150 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
I-Jack Million Casino iyikhasino entsha sha ku-inthanethi ebhekele izishoshovu zaseNingizimu Afrika. Inikwe amandla yiRealtime Gaming (RTG), indawo yokudlala esungulwe ngo-2017 inikeza abadlali uhla oluphelele lwemidlalo yekhasino ethandwa kakhulu ngokusebenza kwabo okubushelelezi ne-Gameplay ejabulisa kakhulu.
Kutholakala kuwo womathathu amapulatifomu – ukulanda, ukudlala ngokushesha kanye neselula – iJack Million Casino isebenzisa ingqikithi ecocekile nenhle futhi elula ukuhamba isikhombimsebenzisi. Uzosesha kalula imidlalo enikezwayo futhi waziswe ngazo zonke izici ezibalulekile zekhasino njengephakheji enkulu yokwamukela nokukhushulwa okuhehayo. Inikeza abadlali ithuba lokudlala neliphephile, uJack Million usekela zonke izindlela ezinkulu zokukhokha zomhlaba nezasekhaya ezikuvumela ukuthi uxhase i-akhawunti yakho yekhasino ngeRandi laseNingizimu Afrika (i-ZAR) futhi usule ama-winnies akho ngendlela esheshayo futhi elula ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ezinye zezinketho zebhange ezisekelwayo yiVisa, MasterCard, Neteller, EasyEFT, Skrill, ecoPayz neWire Transfer.
Ukuba ngomunye wabahlinzeki be-software abahlonishwa kakhulu emhlabeni, i-RTG iyaziwa kakhulu emakethe yaseNingizimu Afrika. Abadlali bangakhetha ekukhetheni okubanzi kwemishini yama-slot kufaka phakathi ividiyo, izikhala zakudala nezithuthukayo. Ngaphandle kwayo yonke imidlalo oyintandokazi ngaso sonke isikhathi efana neCleopatra’s Gold noma iTriple Twister, abadlali bangathatha nethuba labo ekukhishweni kwakamuva okufaka ihluzo ezithuthuke kakhulu nezici zebhonasi ezinomvuzo. Amanye ama-slots wevidiyo aletha ama-jackpots angahleliwe ama-Major kanye nama-Minor, ngenkathi izinqubekela phambili ezimbili zitholakala, i-Megasaur neSpirit of the Inca, ezothumela ama-jackpots aguqula impilo kubanqobi abanenhlanhla. Uma unezinhlobo eziningi zokuzijabulisa zendabuko, ungathatha ithuba lakho ngezinhlobonhlobo zeBlackjack, i-Roulette, i-Poker, i-Video Poker kanye nemidlalo ekhethekile.
Amafoni asekelwa yiJack Million Casino (i-Android, iWindows, i-Apple):
VAKASHELA JACK MILLION MOBILE CASINO
Yenzelwe ukudlala kuma selula, i-Jack Million Casino ingafinyelelwa ngokushesha kusuka kusiphequluli sakho seselula kungalandi noma yiluphi uhlelo olukhethekile oludingekayo. Uhlobo lweselula lekhasino ludlala kuma-smartphones akamuva namathebulethi anikwe amandla yi-Android, iOS neWindows.
Uma usuqale ukufaka imali yangempela, kuzoba nemali engu-R15,000 yokubamba kanye nokunye okunzima ukumelana nokunikezwa. Uma kunenkinga ethile, zizwe ukhululekile ukuxhumana nabenzeli bamakhasimende abatholakala ubusuku nemini nge-imeyili, inombolo yamahhala ye-SA noma ingxoxo ebukhoma.
Ngokuya ngepulatifomu odlala kuyo, i-Jack Million Casino inikela ngemidlalo engu-300 yekhasino enikwa amandla yi-RTG. Ikhasino yokulanda inikeza umtapo wolwazi ohluke kakhulu kanye nemiqhudelwano yama-slot ongabamba iqhaza kuyo ukuqhudelana nabanye abadlali ukuthola umklomelo ophezulu. Uhlobo lweselula lwekhasino lunikela ngemidlalo engaphezu kuka-70 yekhasino.
Amakhasimende amasha we-Jack Million Casino angafuna imali efinyelela ku-R15,000 angahlengwa ngaphakathi kwephakeji elihle lokwamukela ngaphezulu kwamadiphozithi amahlanu okuqala. Ngaphambi kokuthi wenze inkokhelo ekhasino, faka ikhodi yekhuphoni WELCOME kwa-Cashier futhi i-bankroll yakho izophindwa kabili lapho usufake idiphozi. Ngaso sonke isikhathi lapho uzothola ibhonasi engu-100% yemidlalo efinyelela ku-R2,000.
Uma ufuna okuhlangenwe nakho okuthokozisayo nokunomvuzo kumakhasino aku-inthanethi noma eselula amukela i-ZAR, u-Jack Million angaba indawo yakho elandelayo yokugembula online. Bheka i-JACK MILLION namuhla !!
Imidlalo ye-Jack Million Casino neBanking
Izinhlobonhlobo zegeyimu: Imidlalo yetafula, ama-Slots, i-Video Poker, i-Keno, ama-Scratch Cards, ama-Craps.
Izinketho Zediphozithi: I-Visa & MasterCard, Neteller, Skrill, ecoPayz, EasyEFT South Africa ne-EntroPay.
Imininingwane mayelana ne-Casino
Kusungulwe: 2017 Inombolo yamahhala ye-SA: +0800981522
Opherethwa ngu: MJE Group Ltd I-imeyili: [email protected]
Ilayisensi: I-Curacao Ingxoxo Esheshayo: Cha
Inguqulo Yokulanda: Yebo Ukuxhaswa kwe-24/7/365: Yebo
Inguqulo Engalandiwe: Yebo Iwebhusayithi: Chofoza lapha ukuvakashela isayithi
Izipesheli Zokwamukelwa e-Jack Million Casino
Ibhonasi yediphozi engekho: Akukho
I-Jack Million Casino yamukela abadlali abasha ngokumangalisayo R15,000 Oyithola ekubhaliseni + 100 Yama spins Wamahhala
Ibhonasi yediphozithi yokuqala – Ibhonasi engu-200% – Kufika ku-R5,000 – 50 Spins Mahhala.
Ibhonasi yediphozithi yesibili – Ibhonasi engu-100% – Kufika ku-R5,000 – 50 Spins Mahhala
Ibhonasi ngokudiphozita okwesithathu – Ibhonasi engu-200% – Kufika ku-R5,000 – 50 Spins Mahhala
Amaphromoshini Akhethekile, Amabhonasi Nezici Eziyinhloko
Impelasonto Ehlanyayo: Thola ibhonasi yokulayisha kabusha engu-50% efinyelela ku-R5,000 kumadiphozithi ama-2 njalo ngempelasonto.
Ukubuyiselwa kwemali masonto onke: Faka idiphozi phakathi koMsombuluko neSonto ukuze uthole ibhonasi yokubuyisa eyi-10% ngoMsombuluko.
Ibhonasi Yokuthumela Yomngani: Cha
Amaphuzu we-Comp; Ngokubheja kuka-R10 okwenzayo uzothola i-1 Comp Point.
Igeyimu Yenyanga: Jabulela ukudlala umdlalo we-slot wenyanga bese uzuza ama-Comp Points kathathu.
Iqembu Lokwethembeka: Yebo – Thola Amaphuzu we mali bese ukhuphuka isitebhisi se-VIP ukuze ujabulele isipiliyoni semidlalo esivuzayo.
Isici Esibalulekile: Ama-jackpots aqhubekayo, i-VIP Loyalty Scheme kanye ne-Slot Tournaments.